जहाँ लाग्यो त्यहीँ सफल ! - Dhangadhi Khabar
शुक्रबार १४, माघ २०७८ ०२:१३
जहाँ लाग्यो त्यहीँ सफल !
मुकेश कुँवर, अछाम । कोरोना संक्रमणका पहिलो चरणका बेला सुदूरपश्चिमको अवस्था अस्तब्यस्त थियो । एकातिर रोगको महामारी अर्कोतिर बन्दाबन्दीले सबैको जनजीवन तहसनहस हुन थालेको थियो । विरामीहरुले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधी पाउन सकिरहेका थिएनन्, अशक्त र अपाङ्गता भएकाहरुका सहारा सामग्रीहरु सकिएर सन्नाटामा थिए, विपन्न र मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनु पर्ने परिवारहरुको चुल्ह्रो बल्न बन्द हुने अवस्था थियो ।
यस्तै प्रकारका अनेक संकटको सामना गरिरहेका विपन्न तथा सहाराविहीनहरुको घर–आँगनमा एक्कासी केही केही न केही सहयोगी सामग्री ल्याएर टुप्लुक्क आइपुग्थे भरत शाह । आफ्नो घर–आँगनमा टुप्लुक्क भरतलाई देखेपछि कैयौं सहाराविहीनका आँखा रसाएका हुन्थे, संकटको सामना गरिरहेका बेला टुप्लुक्क भरतलाई देखेपछि कतिपयले त उनलाई भगवानकै रुप ठान्थे । त्यही भन्थे पनि ।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेको युवा संघमा क्रियाशील उनी हालै अछाममा भएको जिल्ला अधिवेशनमा आफू उम्मेदवार बनेको पदमा सानदार ढंगले विजय हासिल गर्न सफल भएका छन् । जिल्ला कमिटि सदस्यमा निर्वाचित भएका उनी आगामी दिनमा आफ्नो सम्पूर्ण समय भूगोलको राजनीतिमा समर्पित गर्ने उद्देश्य लिएको बताउँदै उनले भने ‘अहिलेसम्मका मेरा सबै अनुभव र भोगाई र सिकाइका आधारमा अब राजनीतिमा लगाउँछु । राजनीतिबाट नै हो समाज सुधार गर्न सकिने भन्ने विश्वास छ मेरो ।’
शुक्रबार ३०, पुष २०७८ ११:०१ मा प्रकाशित